Miami foodies na ndị hụrụ ihe niile Caribbean na-a rejoiceụrị ọ !ụ!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Miami foodies na ndị hụrụ ihe niile Caribbean na-a rejoiceụrị ọ !ụ!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Mmanya & mmuo
Ihe ụtọ niile nke Caribbean ga-adị na ngosipụta zuru oke ma bịa na Miami na Caribbean305. Nwee afọ ojuju gastronomic nke karịrị mba 16 Caribbean nke ndị ọkachamara na-emeri emeri. Kedu ebe ọzọ ị nwere ike ị gafere agwaetiti gafee Caribbean, nwee ọ barụ na-emeghe ma gbaa egwu n'abalị ahụ maka egwu ndị Caribbean kachasị ewu ewu? Nke a bụ ihe omume Caribbean nke afọ!
• Open Ogosi featuring tọrọ ụtọ Caribbean cocktails mere site Halllọ Nzukọ nke Maara Aha mixologists
• Unlimited tapas ịke efere mere site award emeri Caribbean chefs
• Egwu na ntụrụndụ Caribbean
• Onyinye iji merie ezumike ezumike Caribbean na ọtụtụ ndị ọzọ!
Ndi Caribbean Hotel na Tourism Association (CHTA) gosipụtara, Caribbean305 bụ mmemme a na-eme kwa afọ nke gosipụtara ọmarịcha nri ndị Caribbean ka ọ na-achịkọta ndị isi nri na ndị na-a bartụ mmanya na mpaghara ahụ.